मेरा ग्राहक नेता, सांसद, पुलिस र आर्मी « हाम्रो ईकोनोमी
मेरा ग्राहक नेता, सांसद, पुलिस र आर्मी
रातोपुलको एउटा क्याफेमा सेतो पेन्ट, कालो र नीलो छिर्के्मिर्के टिसर्टमा आइपुगिन् उनी । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा यौनकर्मीको संख्या ५४ हजार नाघिसक्यो । त्यही ५४ हजारको संख्या मध्येकी एक थिइन्, उनी । भित्री मधेसकी एउटी सोझी युवती कसरी काठमाडौंकी मध्यम स्तरको यौनकर्मी हुन पुगिन् ? निकै लामो कसरतपछि आत्मकथा सुनाउन राजी भइन् । उनको सर्त थियो ‘मेरा छोराछोरी ठूला भइसके, उनीहरुलाई मेरो कामबारे थाहा छैन, परिचय नखुलाइदिनुहोला ।’ उनको सर्त स्वीकार भएसँगै उनी शुक्रवारकर्मी प्रजु पन्तलाई दुई दशक लामो यौनकर्म सुनाउन तयार भइन् ।
सुरुमा मैले जे काम गरिरहेकी छु, त्यसलाई यौनकर्म भन्छन् भन्ने थाहा थिएन । भित्री मधेसमा जन्मिएकी म जसले खान दिन्थ्यो, आफ्नो गुजारा चलाउने खर्च दिन्थ्यो उसैसगँ रात बिताइदिन्थेँ । कतिले त पैसा पनि दिँदैनथे ।
१९ वर्षकै उमेरमा श्रीमान् बित्नुभयो । त्यसपछि मेरो काला दिन सुरु भए । त्यतिबेला मेरो बच्चा दुई वर्षको मात्र थियो । अर्काे बच्चा २ महिनादेखि पेटमा थियो ।
श्रीमान्का अरु दाजुभाइ नभएका हैनन् तर उनीहरुले वास्तै गरेनन् । घर तिरकालाई मात्र के भन्नु ? माइतीले समेत वास्ता गरेनन् । १२ वर्षको हुँदा नै आमा बित्नुभयो । बुबा अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो । दाजुको सरकारी जागिर थियो । उहाँले चाहेको भए भरथेग गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो तर कहिल्यै ‘खर्च कसरी चलेको छ’ भनेर सोध्नु भएन ।
आम्दानी हरायो, यता छोराछोरी हुर्किए । पढाउने बेला भइसकेको थियो । कतैको आडभरोस थिएन । सासूआमाले माया त गर्नुहुन्थ्यो तर जेठाजूले देख्नै नसक्ने !
मलाई पढाउने टिचर थिए । उनले म सानो छँदा कपाल कोरिदिनु हुन्थ्यो । स्कुलमा पढ्न सघाउनुहुन्थ्यो । विवाह भएर स्कुल छुटे पनि देखभेट भइरहन्थ्यो । एक दिन उहाँले पोखरा घुम्न जाउँ भन्नुभयो । त्यतिबेलासम्म म कतै गएकी थिइनँ । गुरुले नै जाउँ भनेपछि घरमा कुरा मिलाएँ ।श्रीमान् थिएनन् । त्यत्तिबेला कसैले मायालु पाराले बोलाउनु नै ठूलो कुरा लाग्थ्यो । बाइकमा सरसँग पोखरा पुगेँ ।
त्यसपछि उहाँको र मेरो सेक्स सम्बन्ध भएछ । मैले यो कुरा भोलिपल्ट मात्र थाहा पाएँ । मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्यो । माया गर्नेले सेक्स गर्छन् भन्ने लाग्थ्यो । त्यो समय मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो । चित्त बुझाएँ । पछि थाहा भयो, सरले त मेरो बलात्कार गर्नुभएको रहेछ !
मलाई विवाह गरेको लोग्नेले मलाई असाध्यै माया गथ्र्यो । उसले उपहारको रुपमा दुई सन्तान छोडेर गएको थियो । मैले अर्काे विवाह गरेर बच्चा हुर्काइनँ भने उसको मायाको अपमान हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसैले अरुसँग सम्बन्ध राखे पनि विवाह गर्ने सोच कहिल्यै आएन ।
उहाँसँगको सम्बन्ध पनि नराम्रो लाग्न थाल्यो । जहिले आए पनि सेक्स गर्नै हतार । कुरा गर्न पनि नपाइने ! उसले मलाई यौन सन्तुष्टिका लागि मात्र उपयोग गरेझैँ लाग्न थाल्यो । एक दिन ठूलै झगडा भयो यही विषयमा र छोडिदिएँ ।
त्यो समयमा स्थानीय रेडियोमा ‘मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो । मैले आफू विधवा भएपछि पाएको दुःख लेखेर त्यही कार्यक्रममा पठाएँ । ठेगाना पनि लेखेकी थिएँ । त्यसपछि त मलाई प्रहरी र सेनाका मान्छेहरुको चिठी पो आउन थाल्यो !
घर भारतीय सीमानजिकै थियो । खर्च चलाउन भारतबाट सामान ल्याएर बेच्न थालेँ । सीमामा कर बुझाउनु पथ्र्यो । कर बुझाए नाफै हुँदैनथ्यो । सीमामा तीन वटा चेक पोस्ट थिए । तीन वटा चेकपोस्ट झेल्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो । उपाय खोज्दा आफ्नै शरीर देखेँ । तीन वटै चेकपोस्टका प्रहरीसँग लभको नाटक गरेँ । उनीहरुलाई शरीरमार्फत् सन्तुष्ट पारेँ ।
सबै सम्बन्ध पैसाका लागि मात्र पनि हुन्नथ्यो नि ! हाम्रो पनि मनै हुन्छ । कसैकसैसँग सेक्ससँगै माया पनि लागिहाल्थ्यो ।
कुरा मिलायो । पहिला पैसा लिनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यो केटालाई मैले केही ढाँटिनँ । रेगुलर भेट्नुपर्ने भए पो ढाट्नु ! जे कामका लागि आएको हो, गर्छ–जान्छ भन्ने थियो ।
(कुराकानीकै बीचमा उनको मोबाइल बज्यो । अफिसतिर छु भनेर राखिन् । भनिन्, ‘यो चैँ अहिलेको बूढाको फोन । बूढा ? कस्तो बूढा ? उनको उत्तर थियो, ‘पाँच वर्षदेखि ऊ मेरो ब्वाईफ्रेन्ड भएको छ । मैले आफ्नो पेसा पनि छोडेको छैन, उसले घरपरिवार पनि छोडेको छैन ।’)
टन्न पैसा दिने मात्र हैन, पैसा नदिने, मेरो भएको सामान पनि चोरेर लैजाने ग्राहक त कति आए कति ! कोही त सेक्स गरिभ्याएपछि ‘तँलाई रण्डी’ भनेर गाली गरेर पैसा नदिई भाग्थे । त्यतिबेला के बोलुँ न के नबोलुँ हुन्थ्यो ।
उसले होटलको बिल मैसँग माग्यो । सबै बिल तिर्यो । अगांलो हाल्ने, किस गर्ने्बित्तिकै माया गरेको अनुभव भइहाल्यो मलाई । रातभरि मलाई भोग्यो ।
उसले सबै पैसा माग्यो, मैले दिएँ । भद्रकालीमा काम गर्छु भन्थ्यो । मलाई खासमा नाम पनि थाहा थिएन । अहिले जस्तो भएको भए त सबै हेर्थें नि !
एकैछिनमा आउँछु भनेर गएको ऊ भोक लागिसक्यो आउँदैन । कतै जान भाडा पनि थिएन । भद्रकाली मन्दिर बसेर रोएँ, सरापेँ । कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो ! संयोग भनौँ, गाउँकै एक जना दाइसँग भेट भयो । पैसा हरायो भनेर ढाटेँ । उहाँले दिनुभयो ।
करिब १० वर्ष गाउँमा यसरी नै बसियो । धेरै जनासँग सम्बन्ध भयो । माइतीकाहरु हाम्रो बेइज्जत गरी भन्थे तर जिम्मेवारी चाहिँ नलिने । हेर्ने बेलामा वास्तै नगर्ने अनि बेइज्जत भो भनेर मात्र हुन्छ ? म र मेरा बच्चा भोकै मर्नु ?
काठमाडौँमा आएपछि मात्र थाहा भयो, मैले गाउँमा बस्दा गरेको काम त यौनकर्मीको रहेछ ! म जस्तै अरु पनि हुने रहेछन् ! पहिला त यही धन्दा पनि के गर्नु भन्ने लाग्थ्यो । बाध्यता थियो । काठमाडौं आएपछि केही गल्ती गरेझैँ लागेन । जसले जे सक्छ, त्यही गर्ने त हो !
कण्डम संस्थाले दिन्थ्यो तर प्रायः आइरहने ग्राहकहरु कण्डम लगाउन मान्दैनन् । त्यो ग्राहकले मलाई घरमा दाल, चामल किन्ने पैसा दिन्थ्यो, त्यो संस्थाले कण्डम मात्र दिन्थ्यो । कण्डम खानु भएन !
उहाँहरु यस्तो सम्बन्ध गोप्य रहोस् भन्ने चाहनु हुन्छ । धेरै नबोल्ने, काम सक्ने अनि गइहाल्ने बानी हुन्छ उहाँहरुको । जसले यस्तो सम्बन्ध बाहिर खुलाउँदैनन्, नेताहरु त्यसकैमा त आउने हुन् !
मैले मिसकल गर्ने्बित्तिकै कलब्याक गर्ने नेता अहिले पनि छन् । सांसदसँग पनि रात बिताएकी छु । नेता र सांसदसँग बस्दा हामी आफैँले होटलमा कोठा लिनुपर्छ । उनीहरु त आउने मात्र हो । नेताले सेक्स गर्दागर्दै ‘यौन व्यवसायीको लागि कस्तो नीति बनाउने’ भनेर पनि सोध्छन् ।मेरा रेगुलर ग्राहक आर्मी र पुलिस पनि छन् । आर्मीमा जर्नेलसम्मका व्यक्तिसँग बसेकी छु । पुलिस त कति आए आए !
एकचोटी काठमाडौँमा होटलमा एकजनाले मसँग सम्बन्ध राख्ने भनेर आयो । उसलाई मैले सक्दो खुसी बनाउने प्रयास गरेँ । जब उसले काम सक्यो, त्यसपछि म नउठ्दै अर्काे केटा पनि आयो । ऊसँग पनि र्ग भन्यो, गरेँ । ऊ गयो, फेरि अर्काे आयो । तीनै जनाले भोग गरे तर एक पैसा दिएनन् । यस्तो सम्झँदा अहिले पनि नमज्जा लाग्छ ।
सेक्स भावनात्मक र शारीरिक मिलन भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ तर हामीजस्ता यौनकर्मीको भावना कसले बुझ्ने ? कोही ग्राहक त पशुजस्तै हुन्छन् ।
एक दिन त्यस्तै पशुजस्तो ग्राहक मेरो भागमा पर्यो । उसको सेक्स गर्ने तरिका शरीरलाई निकै पीडा दिने रहेछ । उसले जसरी बस् भन्यो उसरी बस्न पर्ने । नयाँ–नयाँ स्टाइलमा बस्न लगाउँथ्यो, नबसे झपाथ्र्यो । भन्थ्यो– ‘मैले तँलाई पैसाले किनेको हो, मैले जसरी बस्, र्ग भन्छु तैँले उसैगरी मान्नुपर्छ’ । त्यो समयमा यति दुखेको थियो कि म त २÷४ दिन काम नै गर्न सकिनँ ।
माइतीले हेरेनन्, घरकाले भरथेग गरेनन् । कुनै काम गर्न न सीप थियो न शिक्षा । मैले त्यो बेलामा आफन्तको साथ खोजेकै हो नि ! कसैले दिएन । के खाइस्, के लाइस् ? बालबच्चा कसरी पढाउँछेस् भन्ने कोही भएनन् । अनि जे जानेँ, त्यही गरेँ ।